asturnaanta iyo gelitaanka - Tenants Victoria
Xeerka Kirada Guryaha (Residential Tenancies Act) 1997 waxay cadeyneysaa inaad xaq u leedahay ‘ku raaxeysiga’ ee gurigaaga. Hantiileyaasha guryaha iyo wakiillada guryaha kireeya waxay leeyihiin xoogaa galitaan ah, laakiin waa inay buuxiyaan shuruudaha qaarkood. Haddii ay ka soo bixi waayaan shuruudahan, maahan inaad u oggolaatid inay gurigaaga galaan.
qufulka iyo rabshadaha qoyska
Ilaa iyo inta la siinayo ogaysiin sax ah, milkiilaha guriaga ama wakaalad waxay xaq u leeyihiin inay galaan gurigaaga, waxayna ku soo celin kartaa qof kale haddii
Ogaysiin ah inay ku Faaruqiyaan in ama Ogaysiin Loogu Talolagay Faaruqin ayaa lasiiyay waxayna dhici doontaa wax ka yar 14 maalmood, waxayna rabaan inay muujiyaan hanti mustaqbalka kireyste/ijaarte
hantida waa in lagu iibiyaa ama loo isticmaalaa amaah ahaan waxayna rabaan inay tusaan hanti qofka iibsada ama amaah bixiyaha ah (xusuusin: xuquuqdan gelitaanku kuuma sii kordhineyso ‘furitaanka baadhitaanada’ ama ka qaadida sawiraan iyada oo ujeedadu tahay ku xayeysiinta hantida iibka ah – arag milkiile guri ayaa iibinaya macluumaad dheeri ah)
waxay u baahan yihiin inay u fuliyaan waajibaadka hoos yimaada heshiiskaaga kireyste (lease), Xeerka Kirada Guryaha (Residential Tenancies Act) 1997, or another law
waxay leeyihiin hanti oo la qiimeeyay
waxay leeyihiin sabab macquul ah oo ay aamminsan yihiin inaad ku gudan weyday waajibaadkaaga sida ku xusan heshiiskaaga kireyste amaXeerka Kirada Guryaha (Residential Tenancies Act) 1997
waxay rabaan inay baaraan hantida (waa haddii uusan jirin baaritaan ilaa 6dii bilood ee la soo dhaafay mana ahan seddexdii bilood ee ugu horeysay kirada)
Haddii mulkiilaha gurigu ama wakaalad ay doonayaan inay galaan gurigaaga, waa inay:
ku siiyaan ugu yaraan 24 saacadood ‘ogeysiin ujeedkooda ah inay booqdaan, iyagoo sheegaya sabab macquul ah sababta ay u doonayaan inay booqdaan
kuugu soo diraan ogeysiinta boostada ama adiga kuugu soo dhiibaan shaqsi inta u dhaxaysa saacadaha 8 subaxnimo ilaa 6da fiidnimo (haddii ogeysiin lagu soo diro boostada, waa inay ku darsadaan waqti ku filan oo boostada laguugu soo diro. Arag wakhtiga Boosta la helo ee Austalia). mulkiilaha guriga ayaa kugu siin kara ogeysiin habka elektaroonigga ah sida emaylka haddii aad oggolaato ( arag laga bilaabo kireyste wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan oggolaanshaha in ogeysiisyada lagu diro elektirooniga ahaan)
kaliya booqo inta u dhaxaysa saacadaha 8 subaxnimo iyo 6-da galabnimo, oo yaanay noqon fasaxyada guud
hasii joogin in kabadan intii loo baahnaa
Milkiilaha guriga ama wakaalo ayaa waliba soo gali kara gurigaaga sabab kasta ha noqotee haddii aad ogolaanshahaaga siisay gelitaanka 7dii maalmood ee la soo dhaafay. Galitaankani wuxuu noqon karaa wakhti kasta oo aad ku heshiiseen mar labaad milkiilaha guriga ama wakaalo laga yaabaa inay keenaan qof kale, sida ganacsade, oo ay la socdaan haddii loo baahdo si loo gaaro sababta gelitaanka.
Haddii ay bixiyeen ogeysiin sax ah, waxa ku saaran waajibaad ah inaad u oggolaato milkiilaha guriga ama wakaalo si aad u galaan hoyga, xitaa haddii uu yahay wakhtiga aan kugu haboonayn ama xitaa haddii aadan joogin. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad ku gorgortantid wakhti kugu habboon. Qofka gurigaaga soo galaya waa inuu u dhaqmaa si macquul ah waana inuu ka tagaa isla marka ay dhammeystaan wixii ay u yimaadeen.
Ilaa milkiilaha guriga ama wakaalo raacdo nidaamka saxda ah, waa dambi inay iyagu galaan gurigaaga ayagoon haysan cudurdaar macquul ah.
Haddii alaabtaada waxyeelo soo gaarto inta lagu guda jiro booqashada milkiile guri ama wakaalo booqasho, waad dalban kartaa magdhaw .
Haddii milkiilaha guriga ama wakaalo aysan buuxin shuruudaha gelitaanka saxda ah ama ay sameeyeen booqashooyin badan ama kuwa waxyeelo leh , waxaad dalban kartaa Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) Amarada Xakamaynta Tani waxay sidoo kale quseysaa wicitaanada taleefanka ama warqadaha, maadaama kuwani ay jabiyeen xuquuqda aad u leedahay raaxaysiga aamusnaanta. Amarada Xakamaynta waxay ka mamnuuci kartaa ama xaddidi kartaa milkiilaha guriga ama wakaalo inay soo galaan dhismaha ama ay kula soo xiriiraan waxaana ku fulin kara booliska. Waa dambi in milkiilaha guriga ama wakaalo inay jabiyaan Amarka Xakamaynta waana la xukumi karaa.
Waa dambi in milkiile guri ama wakaalo inay soo galaan gurigaaga haddii aysan buuxin shuruudaha gelitaanka saxda ah, haddii aysan haysan cudurdaar macquul ah, sida xaalad degdeg ah mooyee. Waxaad u sheegi kartaa dembiyada Consumer Affairs Victoria kuwaasi oo soo saari kara sharci jebinta ogeysiin ee milkiile guri ama wakaalo haddii ay ku guuldaraysteen inay raacaan sharciga.
Haddii milkiilaha guriga ama wakaalo ay kuu sii wado inay ku dhibaan, waxaad jeclaan lahayd inaad joojiso kirada oo aad ka guurto. Haddii aadan haysan waqti go’an oo kirada ah, waxaad si fudud u siin kartaa 28 maalmood oo qoraal ogeysiin ah aanad ka guurto. Haddii aad direyso ogeysiin, waa fikrad fiican inaad isticmaasho emaylka diiwaangashan waana inaad ku darsataa waqti ku filan oo boostada laguugu soo diro. Arag wakhtiyada Boostada lahelo Australia. Waad siin kartaa Ogaysiintaada Kutalagalka Faaruqinta elektiroonig ahaan (tusaale ahaan, emayl ahaan), haddii milkiilaha gurigu oggolaaday inaad sidan u ogaysiiso. Haddii aad kusoo dirto ogeysiinta emayl ahaan, waa in aad hubiso in ay tahay cinwaanka emaylka uu magacaabay milkiile guri ama wakiil shirkad guryaha kiraysa iyo haddii ay suurtogal tahay codsiga akhrinta rasiidka.
Haddii aad leedahay waqti go’an oo kiro waxaad u baahan doontaa inaad u adeegto milkiilaha guriga oo leh 14-maalmood oo jebinta Waajibaadka jabinaysa raaxadaada aamusan – arag marka milkiilaha gurigu jebiyo waajibaadkooda . Kadib waad dalban kartaa Waafaqsanaanta Amarka laga bilaabo VCAT. Haddii aysan wali joojin dhibaataynta waxaad awood u yeelan kartaa inaad siiso milkiilaha gurigaaga 14-maalin ogeysiin oo ah Kutalogalka Faaruqinta ku guuldareysashada inaad u hogaansanto Amarka VCAT – arag jabinta heshiiska kirada si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. Nagala soo xiriir, adeega TAAP e deegaankaaga, Tenancy Plus bixiye ama Xarunta Sharciga Bulshada haddii aad jeclaan lahayd talo ku saabsan goorta aad bixi karto.
Waxaad kaloo xaq u yeelan kartaa magdhaw marka milkiile guri ama wakaalad ay ku guuldaraystaan inay kuu oggolaadaan inaad ku raaxaysato raaxaysigaaga deggan ee gurigaaga.
Haddii aad beddesho wax quful ah oo ku yaal hantida, waa inaad siisaa milkiile guriga qayb ka mid ah furaha. Ilaa aad ka tahay ‘qof ilaaliyay’ Ogaysiinta Badbaadada Rabshada Qoyska ama Amarka Dhexgalka ama Amarka Dhexgalka Badbaadada Shaqsiyeed , kuma talineyno inaad baddesho qufulka si aad u ilaaliso asturnaantaada. Hadaad diido inaad siiso furaha milkiilaha guriga, waxay kugusoo oogi karaan Ogaysiinta Jebinta Waajibaadka .
Waa inaadan baddelin wax kasta oo quful ah oo qayb ka ah nidaamka furaha muhiimka ah (halkaasoo uu ku yaal hal fure muhiim ah oo ku habboon dhowr quful, sida dhammaan albaabbada ku yaal hal dabaq) adiga oo aan marka hore helin oggolaanshaha milkiile guri. Haddii milkiilaha guriga ku diido baddelka qufulka sabab la’aan, waxaad dalban kartaa VCAT Amar kaasi oo laguu oggolaaday inaad baddesho oggolaansho la’aantooda.
qufulka iyo rabshadaha qoyska ama amarrada / ogeysiiska amniga shaqsiyeed
Haddii aad tahay ‘qof la ilaaliyay’ Ogaysiinta Badbaadada Rabshada Qoyska ama Amarka Dhexgalka ama Amarka Dhexgalka Badbaadada Shaqsiyeed iyo ‘jawaabaha’ (qofka rabshadda sameeyay) waa laga saaray gurigaaga, waxaad xaq u leedahay inaad baddesho qufullada albaabbada iyo daaqadaha dibedda, oo ay ku jiraan qufulka nidaamka mashiinka muhiimka ah. Uma baahnid inaad magacaaga ku qorto heshiiska kirada laakiin waxaad u baahan tahay inaad ku noolaato hanti. Waa inaad siisaa furaha wixii kale ee kireystayaal ee ku nool hanti (marka laga reebo jawaabaha).
Waa inaad siisaa qayb kamid ah furaha qufulka cusub rabshadaha qoyska ama ogeysiinta badbaabadada shaqsiyeed ama amarka milkiilaha guriga ama wakaalo, laakiinse iyaga looma oggola in la siiyo jawaabaha muhiimka ah ee qufulka cusub ilaa iyo inta ogeysiin amar uu jiro.
Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo bixinta furayaasha si loo beddelo, waxaad awood u yeelan kartaa inaad codsi u gudbiso Maxkamadda Caawinta Dhibanayaasha Dembiga (VOCAT ) Gargaarka maaliyadeed ee degdegga ah. Macluumaad intaas ka badan wac Dhibbanayaasha Dembiga Khadka Caawinta1800 819 817(Wicitaanka Bilaashka ah). Deegaankaaga Xarunta Sharciga Bulshada wuxuu kaloo awood u yeelan karaa inuu ku caawiyo amarada faragelinta iyo VOCAT, iyo The Orange Door kugu xiri karaa adeegyada xagga sharciga iyo dhaqaalaha.
Waxaa jira sharciyo xakameynaya sida wakiilasha guryaha loo oggol yahay inay u isticmaalaan macluumaadkaaga shakhsiyeed. Haddii aad qabtid wax cabashooyin ah oo ku saabsan sida loo adeegsanayo macluumaadkaaga shaqsiyeed, la xiriir Wakiilka Macluumaadka ee Australia 1300 363 992ama cabasho qoraal ah u diraan Arrimaha Macmiilka Victoria ama Kiraynta Guryaha Victoria .
Macluumaadka boggan waxay la xidhiidhaan heshiisyada jira ee kireysiga iyo heshiisyada kireysiga muddada go’an ( muddada go’an ee ka yar 5 sano) Macluumaadku waa mid cusub taariikhda daabacaadda, laakiin isbeddel ayaa lagu samayn karaa kaasi oo ku xidhan isbeddelada ku iman kara shuruucda la xidhiidha kiro/ijaar hantiyaha. Haddii aanad hubin shuruucda ku khuseeya, waa inaad raadiso talo sharci.
milkiilaha guriga ayaa iibinaya
markaad rabto inaad baxdo
Ka bixista heshiiskaaga kirada guriga